Kedu ka anyị ga - esi wuo backlinks na 2018?
Ahịa dijitalụ bụ agbanwe agbanwe ebe niile ebe algorithms ọhụrụ nwere ike ịgbanwe iwu egwuregwu niile. Dị ka onye na-ahụ maka onye na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ, ị kwesịrị ịmara otú ị ga - esi dị mkpa iji wuo backlinks n'afọ 2018 ọzọ. Usoro ndị anyị ga-atụle n'isiokwu a nwere ike inyere gị aka inweta ọkwa dị elu karị n'enweghi ike ịbịaru aka na ndị nwe ụlọ ọrụ nwe ụlọ na-enwe olileanya na ị ga-enweta àgwà azụlink ọzọ.
Ọgbọ mgbe azụ azụ na ụzọ dị mfe yiri ka ọ ga-abịa ná njedebe. N'oge a, iji nweta njikọ ịkwesiri ịnye ọdịnaya dị mma, chọta ebe nrụọrụ weebụ ebe ị nwere ike itinye njikọ gị ma melite mmekọrịta na onye nwe ụlọ weebụ.Ebe nrụọrụ weebụ ndị a ma ama dị ka Huffington Post, Forbes, na ndị ọzọ na-eji usoro aghụghọ eme ihe dịka njikọ gị niile ga-esi apụta - raid 5 vs raid 6 raid 10. Ọ pụtara na njikọ gị agaghị aba uru ọ bụla dịka a na-echekwa ha dịka oche. Otú ọ dị, n'eziokwu, ala akwa backlinks nwere uru ụfọdụ site na nlele CTR. Ọ ka ga-ebuli ọkwa ebe ọ bụ na ọ dịghị njikọ ihe ọṅụṅụ na-abịa na saịtị gị.
E nwere ụfọdụ ụzọ dị mkpa iji wuo backlinks nke na-eme dofollow ma nwee uru dị oke mkpa maka njikwa njikwa search engine gị.
Ndabere backlinks site na Google Docs
Ọ na-egosi na Google Docs nwere ike ịghọ usoro bara uru na dị mfe iji nweta backlinks. Naanị ihe ị chọrọ iji jide n'aka bụ ịkekọrịta ihe onwunwe gị na ọha na eze. Google na-enye ihe kacha mkpa maka ngwaahịa ya na nsonaazụ ọchụchọ. Ọ bụ ya mere site na ịmepụta akwụkwọ Google na backlinks na ibe weebụ gị ma ọ bụ ọdịnaya ga-enyere gị aka ịnweta mmiri njikọ sitere na ebe nrụọrụ weebụ dị elu, nke bụ Google. Ịkwesịrị inwe ọ dịkarịa ala 300 okwu gị ederede. Gụnye okwu ọchụchọ dị oke mkpa ị na-achọ ịhazi maka ọdịnaya gị. Ozugbo e kere akwụkwọ gị, ịkwesịrị ịnye URL ya na Google na Bing.
Ndabere backlinks site na saịtị Google
Otu ngwaahịa Google nke nwere ike inye gị ụfọdụ uru bụ saịtị Google. Ọ na-enye gị ohere ịmepụta mkpokọta weebụ n'okpuru aha aha Google, dị ka Google Docs. N'adịghị ka Google Docs, saịtị Google na-enye gị ohere ịhazi gị backlinks. Dị ka nchọpụta ndị na-adịbeghị anya gosiri na saịtị Google na-enye ohere weebụsaịtị nke etinyebere na niches ọ bụla na-asọmpi na-ebuli na nsonaazụ TOP-20. Ọ pụtara na ị nwere ike ịnweta ọtụtụ ederede na nsonaazụ Google TOP dabere na otu ọchụchọ ọchụchọ. Nchịkọta na peeji nke abụọ nke Google SERP ka nwere ike ịdọta ndị ahịa gị nwere ike ịweta okporo ụzọ bara uru na saịtị gị.
Ndabere backlinks site LinkedIn
Ọ bụ ụzọ ọhụrụ nke na-adọta mmiri njikọ na saịtị gị, ma eleghị anya anyị bụ ndị mbụ na-agwa gị banyere ya. Usoro a na-enye gị ohere imeziwanye aha njirimara aha gị nke na-ezube mkpụrụokwu okwu oke okwu gị. Ozugbo ị banye na LinkedIn, ọ na-enye gị ike ịmepụta akaụntụ ụlọ ọrụ. Mgbe ị na-emepụta akaụntụ azụmahịa gị, ịkwesịrị idozi ya n'ụzọ dị otú ahụ na ọ na-elekwasị anya isiokwu gị dị elu. Dị ka LinkedIn peeji nke dị mma na Google, ị nwere nnukwu ohere itinye ya na ọkwa ise SERP.